Toban 3D Movies Top-viewed on Netflix
Netflix ayaa soo baxday in mid ka mid ah si ay u sarreeya boqor shirkadaha kale video kirada oo dhan, oo hadda qurbaannada filimada 3D ay la, ayaa ay naftooda u taagan inuu noqdo hogaamiyaha ee teknoolajiyada cusub. Bal aynu eegno toban ka mid ah filimada ugu caansan 3D ah adeega.
1. lana kulmay
Long on ficil iyo muuqaal, laakiin gaaban oo ku saabsan dhagarta, filimka tani weli waa cajiib in 3D. Movie The sheegay sheekada Milo, qoor hore oo markaa noqda gladiator ah in 79 AD Waxa uu si aad ah kasiya ee la jecel yahay guur la soo habeeyay in lagu senator Roman xun. Complicating arrimaha waa sacoto volcano Mt. Vesuvius, taas oo ka dillaacay xilli ay doonto in Italy. Waxa uu leeyahay si loo badbaadiyo gabadha oo isaga qudhiisana volcano mooyaane. Ma wuxuu u samee waqti?
2. Mr. Peabody iyo Sherman
Filinkani dhaceen ku salaysan jilayaasha ka taxane 1960 Rocky iyo Bullwinkle doono jiidashada iyo ku farxi caruurta da 'kasta. Mr. Peabody waa smart. Aad smart. Waxa kale oo uu eey isaga iyo wiil Sherman. Waxa uu ku Abuuratay mishiinka Way-Back (WABAC), oo dhammaantood way wada safarka mar, kulan dad taariikh muhiim ah joogsiga kasta. In filimka, isdhexgalka la soo dhaafay ay leeyihiin yaabo waxyeelo mustaqbalka, si ay u leeyihiin in ay xaq u mar kale wax.
3. Captain America - Soldier Winter ah
Mid ka mid ah waxyaabaha lagu qoslo la yaabin badan oo caan yahay Captain America. Sheekadan waxay sheegaysaa Qisada Steve Rogers lagu soo celin galay hab geesi- si loo badbaadiyo xubin ka shaqayn jiray ee SHEILD wada jir ah ula Carmalka Black, ay u shaqeeyaan si loola dagaalamo Soldier Winter ah.
Tani 2014 version of taaso caanka Japan qoreysa qorratada Rafaa geesi ah oo cayn kasta. Too xun nin weyn waa sidaas - waa weyn. Isagu wuu wada baabbi'iyaa intii uu jidka, laakiin waxa uu is bahaysi ay nin dhallinyaro ah oo ku saabsan raadinta runta ku musiibada warshadda nukliyeerka, kuwaas oo aan badheedh u aragto sir ah ka qaateen in laga yaabo inuu ku baabbi'iyo adduunka. Ee ah kuwa ka dambeeya jeclaan factoids filimka, waxay jecel doonaa faahfaahinta sida filimkan la sameeyey. Godzilla naftiisa waxa laga sameeyay boqolaal kun oo geesoolayaashu in loo ogolaado inuu eegto macquul ah marka la bixiyo ee CG.
5. la yaabka leh ayaa Spiderman
Wiilkaan dhalinta yar Peter Parker ayaa isku dayaya inuu naftiisa dheelli iyo ka baxo dugsiga waqti, ilaa iyo amuurka naftiisa soo galo, oo uu hadda leedahay in ay mar kale dunida badbaadiyo. Waxa uu sidoo kale u aragto qaar ka mid ah furayaasha uu la soo dhaafay soo galay. Iyada oo ay caanka ah ee buugaagta sheekooyinka maadda iyo heshiisyada maadda ah, waa layaabna ma leh in filimkan waa caan ah, iyo daawashada darto Spidey 3D waxa ay taasi dhan dhehay ayaa in ka badan.
6. Storm Surfers
Ma waxaad gebi amped si ay u arkaan tan filim aad u fiican oo ku saabsan labo surfers ka weyn isha ku heysa inay u soo noqday ayuu mar kale? Ross iyo Tom ayaa baaris ah si aad u hesho hirarka ugu wanaagsan ee Australia leeyahay in ay bixiyaan. Sida magacaba ka muuqata, guys ka soo baxa ee cimilada qaar ka mid xun raadinaya ruxruxo in kaamil ah. Toogtay 3D, sidaas darteed waa ku dhowaad sida aad waxaa tahay, Storm Surfers waa Tacaddi, dude.
7. Jacka Park 3D
The classic Spielberg ayaa u haayay galay 3D. Marka dinosaurs ah oo soo sara kacay in filimka, waxaad dareemi doontaa sida ay dhab ahaantii leeyihiin, sida ay shil galay qolka aad ku nooshahay xoog lifelike. Inkastoo 20 sano ayaa ka soo wareegtay tan iyo markii ay hore u soo baxay, waxa uu dareensan cusub technology cusub mahad.
Campy, cheesy, goob doqon ah, wax kasta oo aad rabto in aad u yeedhaan, waa galab xiiso kastaba daawashada remake this. Saldhigga meel A yimaado dib u Earth iyo shilalka hoos gudaha tunnel mara ee New York ah. The caarada in tunnel soo jeedin galay caarada Rafaa in gurguurto ka mid ah dhulka hoostiisa ah oo magaalada, halkaas oo waalli tasso dhaco galay. Tabar yar oo ku saabsan dhagarta, filimkan la'isweydiiyo-galisay in ay la fariisto baaquli weyn ee salool iyo qaar ka mid ah uu fahmo MST3K. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad dhibaato ay ka soo arachnophobia, waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad qaadato baas ku caarada Rafaa u eg ay aanad cadho burburin karo qolka aad ku nooshahay.
9. Texas jarto 3D
Leatherface soo laabtay, waqtigan in 3D, diyaar u ah inay gooynayaa galay qolka aad ku nooshahay iyo cabsiiyo aad ka hor inta uusan marnaba jeclaan. Tan iyo ab ka film soo socda ka heli haweeney dhallinyaro ah oo guriga ah dhaxlidda ka qaraabo dheer laga badiyay. Laakiin, iyadu ah mid halmaansan sheekada meesha, ama waxa suga iyada. Ha dhaadhici maayo jaranjarada kuwa!
Baabba 'ee Smaug. Taageerayaasha Rabbiga siddo maqsuud doona gebogebada cusub ee filimada oo ku salaysan tixaha farta laatiinka ah ee. Baabbi'inta Smaug socota hobbit Bilbo Baggins iyo saaxiibbadiis, dwarves ah, sida ay isku dayaan in ay dib u hanato ay boqortooyadooda ka Smaug.
Waxaa aad u leedahay - toban filimada 3D weyn waxaad ka heli kartaa oo ku saabsan Netflix.
Sidaas inta badan, markii aad ku nooshahay qulquli filim ka adeeg, aad rabto in aad ku laabato oo mar kale daawato goobta, ama badbaadin filimka dhabarka dambe ciyaaro markii xaaskaaga helo dib ugu soo laabtay safar ganacsi karin.
Sidan meesha Wondershare noqon kartaa caawimo ah. Wondershare Video Converter Ultimate U qoraan karaan filimada aad jeceshahay 3D ka Netflix for loo maqli karo waqti kasta iyo meel kasta. Ma doonaysaa in aad doorashada filimada on a flight cross-dalka? Dhib ma leh. Kids helay oo aan ka heli kartaa oo ku filan ee dinosaurs kuwii? Just isticmaali Wondershare, iyo filim lagu duubay oo aan wax loox ka maqan yahay ama dhibaatooyin inta lagu guda jiro loo maqli doonaa.
Wondershare Ayaa sidoo kale si degdeg ah - ilaa 30 jeer ka dhakhsi badan barnaamij kasta oo kale. Edit ama wax ka beddelo wax kasta oo aad rabto. Waxaad badbaadin karo filim aad ku dhameysatay ee kala duwan oo qaabab, ka dibna u soo dir qalab mobile oo aan wax fiilooyin ama fiilooyinka. Ma doonaysaa in ay qaataan Wondershare u wadid tijaabo ah? Waxaad awoodi kartaa! Just download version tijaabo ah software ka iyo tijaabi si aad u aragto haddii aad u jeclaan. Xitaa haddii aad horay u iibsaday barnaamijka aad ka heli kartaa soo celiyo soddonkii cisho gudahood haddii ay kaliya aanu ku nool yihiin ma ahan ilaa aad ka filayso.
Marka aad isku dayay Wondershare oo lagala soo bixi filimada aad jeceshahay, si kastaba ha ahaatee, ma waxaad u baahan doontaa in ay u la'aan. Marnaba ma inaan sugnaa for filim in ay la yimaadaan saf, tan iyo markii ay mar walba diyaar u yahay inuu ciyaaro qalab aad markii aad rabto in aad ku noqon doonaa.
Sida loo Play 3D Movies la VLC
Sida loo free download Movies 3D ah ee TV 3D
Tayada Sare Video Songs Oo Taageeridda Software Programs
Sida loo Setup iyo Isticmaalka Chromecast
Sida loo Download iyo Beddelaan MySpace Videos in MP3
> Resource > Video > Toban 3D Movies Top-viewed on Netflix